Momba anay - Technika Application Delta
Ny orinasam-pifandraisanay Delta Application Technics tahaka ny ankehitriny, dia naorin'i Jacques Coppens tamin'ny taona 1988. Ilay orinasa avy eo dia nanana ny anarana hoe Corex. Noho ny fahaizan'i Jacques tamin'ny taona nanamboarana milina hampihatra ny tsiranoka, dia vetivety dia nanjary mpiara-miasa ho orinasa marobe ho an'ny orinasa maro ilay orinasa, toy ny indostrian'ny fiara.
Inona no tsy nampitovy an'i Corex tamin'ny hafa? Customization! Ny milina tsirairay dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpanjifa hahazoana vahaolana tsara indrindra.
Tamin'ny taona 2009 dia nanatevin-daharana ny hery niaraka tamin'ny Delta Engineering i Corex. Ny tanjona: ny fahaizana manome serivisy tsara kokoa, ny fanarahana ary ny fitohizan'ny mpanjifa. Ny famokarana milina sy serivisy dia eo am-pelatanan'ny Delta Engineering, mamela an'i Jacques hifantoka amin'ny fampandrosoana ny vahaolana vaovao amin'ny fampiasana ireo haitao farany.
Ankehitriny, tohanan'i ekipa tanora i Jacques, mitambatra ny traikefa sy ny fahaiza-miaina mba hahitana ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fizotran'ny mpanjifantsika. Ny DAT dia manisa vondrona maro an'isa iray, ary koa orinasa vitsy tsy miankina iray amin'ireo mpanjifany.
Anjarantsika ny mamolavola vahaolana ilaina hahafahan'ny mpanjifanay mampiavaka ny hafa. Ny fizotran'ny mpanjifanay, ny akora sy ny mpiasa dia ny KPI antsika rehefa mamorona milina sy vahaolana vaovao.
Ahoana no ahalalantsika ny fametrahana antsika? Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky aminao, ny mpanjifanay: ny valinteninao manan-danja dia ahafahanao manamboatra sy manatsara ny vokatra azontsika. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fahombiazantsika: ny olona ao amin'ny orinasam-pifandraisana sy ny tanjon-dry zareo hamorona. Ny tanjonay dia ny hahatratra ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fahaiza-manaony amin'ny famolavolana vahaolana avo lenta, vidiny lafo, famokarana, fametrahana ary aorian'ny fanohanana varotra. Amin'ny alàlan'ny kolontsaintsika, ny fiara sy ny fahaizan'ny mpiasa tsirairay, dia misy toerana tokana ahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifantsika maneran-tany.